October 8, 2020 - Padaethar
သင့်ကောင်လေးက သင့်ကိုအရမ်းချစ်မိနေပြီဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက် (၅) ချက်
October 8, 2020 by Padaethar
သင့်ကောင်လေးက သင့်ကိုအရမ်းချစ်မိနေပြီဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက် (၅) ချက် သင့်ကောင်လေးက သင့်ကို fell in love ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ စိတ်ဝင်စားကြရဲ့လား။ ချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ သင့်ကိုပဲ အရမ်းချစ်ကျွမ်းဝင်သွားပြီဆိုတာ တော်တော်လေးကို ကွဲပြားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကဲ.. ဒါဆိုရင် သင့်ကို လုံးဝ ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်.. (၁) အရာရာသင့်ကိုပဲ ဦးစားပေးတယ် ဘယ်လိုအရာ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲယှဉ်ယှဉ် အရာရာသင့်ကိုပဲ အမြဲတမ်းဦးစားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ကိုယ်သူနဲ့ ယှဉ်ရင်တောင်မှပဲပေါ့။ ဒါပမေဲ့လည်း သင့်အနေနဲ့ သူ့ကို အနိုင်မကျင့်မိဖို့တော့ သတိပေးပါနော်။ (၂) သင်ကလွဲပြီးတခြားမရှိ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကစားတာ လက်ရှိချစ်သူအပေါ် ငြီးငွေ့တယ်ဆိုတာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အရာတစ်ခုပါပဲ။ သိစိတ်ကြောင့်သာလျှင် ဖောက်ပြန်ခြင်းမထမမြောက်စေတာပါ။ သင့်ကိုတကယ်ကို … Read more
ချစ်ရမှာကြောက်တတ်သူတွေရဲ့ လူတွေမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်လေးများ…
ချစ်ရမှာကြောက်တတ်သူတွေရဲ့ လူတွေမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အချက်လေးများ… တစ်ချို့လူတွေက အချစ် ဆိုတာကို မယုံကြည်ဘူးဆိုတာထက် ချစ်ရမှာကို ကြောက်နေ တတ်ကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက်တော့ အတော်လေးကို စဉ်းစားရမယ့် အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ချစ်ရမှာ ကြောက်တတ်တဲ့ သူတွေဆီမှာ လူတွေမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဒီလိုအချက်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်နော် …။ လူတွေကို မယုံကြည်လို့” သူတို့တွေက အချစ်ကို မယုံကြည်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အချစ်ကို သယ်ဆောင်လာတတ်တဲ့ သူတွေကို မယုံကြည်ကြတာပါ။ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ကွဲကြပြဲကြတာတွေ၊ သစ္စာဖောက်သွားတာတွေ စသဖြင့် ဒါတွေကို တွေ့တာများလာတော့ လူတွေကို ယုံကြည်ရမှာ တွန့်ဆုတ်တတ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ရမှာကို ကြောက်လာ တတ်ကြပါတယ် …။ အသည်းကွဲမှာကို … Read more
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ
စာသားတွေက ကြမ်းထော်နေတာပဲ မိုက်တယ် … ရေးချက်ကို ကြိုက်လို့ ကူးပြီးပြန်တင်တာ သိန်း၈၀၀၀တန်ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောက်ျားကိုလိုချင်ရင် …..ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို …. မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား …. အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့… ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ် ….. Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။ လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန်​ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် … Read more
နာမည်ကျော် ကျိုက်ခမီမြို့မှမျောက်လွှဲကျော် တသိုက် ဒုတိယအကြိမ် Swab ယူ
နာမည်ကျော် ကျိုက်ခမီမြို့မှမျောက်လွှဲကျော် တသိုက် ဒုတိယအကြိမ် Swab ယူ မော်လမြိုင် CBFQ ရဲ့ နာမည်ကျော် ကျိုက်ခမီမြို့မှ မျောက်လွှဲကျော် တသိုက် ဒုတိယအကြိမ် Swab ယူပါပြီး။ ပထမအကြိမ်မှာ All Negative ပါ ….. ဒုတိယအကြိမ်မှာလဲ All Negative ဖြစ်ပါစေဗျာ …. Positive ဖြစ်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်အရွယ် ကလေးရဲ့ ကစားဖော် ကစားဖက်လေးတွေဖြစ်လို့ Q ဝင်ခဲ့ရတာပါ…. သူတို့ကတော့ ဘာမှမသိတော့ ပျော်နေရော … Swab ယူပြီး Coffee ဗူးလေးတွေ တိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်….။ CBFQ မှာ တာဝန်ယူရင်း ကလေးထိန်းအတတ်ပညာတွေတောင် တတ်လောက်တယ် … ဟီးးးး ဇင်မိုး … Read more
စားသောက်လုဆဲဆဲ ငါးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်များ တွေ့ရှိခဲ့
စားသောက်လုဆဲဆဲ ငါးရဲ့ပါးစပ်ထဲမှ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်များ တွေ့ရှိခဲ့ ——- အကုန်သိ သတင်းဌာန ——- စားသောက်မယ့် ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ ပါးစပ်အတွင်းမှာ ပိုးမွှားအင်းဆက်ကောင်တွေနဲ့တူတဲ့အရာတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမစားသောက်မယ့် ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ ပါးစပ်အတွင်းမှာ အခုလို လျိူ့ဝှက်ဆန်းကျယ်တဲ့အရာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါစားသောက်လုဆဲဆဲငါးကို အင်တာနက်ပေါ် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီး တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကပ်ပါးအင်းဆက်ပုံတွေကို National Blood Centre and the Thai Red Cross Society၊ Pakpoom Dejhasadin ဖေ့ဘုတ်စာမျတ်နှာမှာ တင်ပြခဲ့ပြီး …. ပုံတွေဟာ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ( netizens ) တွေဆီမှ အာရုံစိုက်မှု ရရှိခဲ့ကာ ထူးဆန်းတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်တွေကြောင့် အတိအကျ စစ်ဆေး အတည်ပြုဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ … Read more
ကိုယ်တိုင် မွေးစားထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ” သမီးလေး ဆုံးသွားပါပြီ ရှင် ….
ကိုယ်တိုင် မွေးစားထားပြီး ဆေးကုသပေးနေတဲ့ သမီးလေး ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ” သမီးလေး ဆုံးသွားပါပြီ ရှင် …. မွေးရာပါ တီဘီရောဂါ ၊ HIVရောဂါ ကြောင့် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် မနေ့ည ၁၁ နာရီ ၂၇မိနှစ်အချိန်မှာပဲ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံကြီးမှာ ဆုံးသွားပါတယ်။ သမီးလေး အတွက် သက်ပျောက်ဆွမ်း ကပ်ပေးပြီး ရေစက်ချ အမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်….။သမီးလေး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ရှိပါစေ။ နောင်သံသရာမှာ ပြန်တွေ့ခဲ့ရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ မတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ် သမီးရေ…..အမျှ အမျှ အမျှ” KhineHninWai / Akonthi unicode ကိုယျတိုငျ မှေးစားထားပွီး ဆေးကုသပေးနတေဲ့ သမီးလေး ဆုံးသှားပွီဖွဈလို့ အလှနျစိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ” သမီးလေး ဆုံးသှားပါပွီ … Read more
ဒီအရာတွေလုပ်မိရင် ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်…
ဒီအရာတွေလုပ်မိရင် ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်
ဒီအရာတွေလုပ်မိရင် ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ် (၁)အိပ်ယာနောက်ကျမှထခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့ (၂)မနက်ပိုင်းကို ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ (၃)အိပ်ယာထထချင်း မျက်နှာအရင်တန်းသစ်ပါ အစားအရင်စားတာ အိမ်သာတန်းတက်တာ မလုပ်ပါနဲ့ (၄)ဘုရားအရင်ရှိခိုးပြီးမှ အလုပ်ကိုစလုပ်ပါ (၅)ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားတာမျိုး လိပ်ထားတာတို့ ပစ်စလခက်မထားပါနဲ့ (၆)စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါ သူများကို အတင်းပြောတာ ပုတ်ခပ်တာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့ (၇)အနောက်အရပ် မြောက်အရပ်တွေကို ခေါင်းပေးပြီးမအိပ်မိပါစေနဲ့ (၈)ဖိနပ်အဟောင်းတွေ ထီးအပျက်တွေ နာရီအပျက်တွေ အိမ်မှာမထားပါနဲ့ (၉)ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ဘောပင်နဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် မရေးပါနဲ့ (၁၀)ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါးကိုလုံးဝ မပစ်မှားမိပါ​စေနဲ့ မစော်ကားမိပါ​စေ (၁၁)တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တော့ အသားငါးမစားပါနဲ့ သက်သက်လွတ်စားပါ (၁၂)အိပ်ယာထထချင်း ဖုန်းသုံးတာ ဖုန်းပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ မျက်နှာအရင်သစ်ပါ (၁၃)မနက်ပိုင်း ဘယ်သူကိုမှငွေမ​ချေးပါနဲ့ (၁၄)မနက်ပိုင်း အရက်သောက်တာ မလုပ်ရပါ (၁၅)ငွေတွေကို ဖိနပ်နဲ့ထိတာ ထမိန်နဲ့ထိတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့ ဒီအရာတွေကို လုပ်မိရင် … Read more